DNA ကိုအထောက်အထား Exonnerates Death Row အကျဉ်းသား
သူမအလုပ် left အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ 16, 1981 တွင်, လင်ဒါမေလ Craig, Pennsylvania ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Tri-State Mall မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးနုပျိုရောင်းအားတွဲဖက်သူမရဲ့ကားထဲတွင်ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရသည်။ သူမအိမ်မှာရောက်လာခဲ့ပါဘူးအခါ, သူမ၏ခင်ပွန်းကရဲကိုခေါ်။ အောက်ပါနေ့, သားကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှာတွေ့ခဲ့သည် - ရိုက်နှက်ထိုးနှင့်အဓမ္မပြုကျင့် - ကာဘုရားကျောင်းယာဉ်ရပ်နားအများကြီးအတွက်တစ်မိုင်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကွာသူမ၏ကားကနေ။ သူမသည်နေဆဲအဝတ်ကိုဝတ်ခဲ့ပေမယ့်လူသတ်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကျူးလွန်ရန်သူမ၏ထူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဝတ်အစားပွင့်လင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
လေးရက်အကြာ, ရဲတစ်ဦးအသွားအလာချိုးဖောက်မှုများအတွက်နစ်ခ် Yarris တော့ဘူး။ အဆိုပါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရပ်တန့် Yarris နှင့် patrolman အကြားအကြမ်းဖက်ထိပ်တိုက်တွေ့သို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်နှင့်ရဲအရာရှိများ၏ကြိုးပမ်းလူသတ်မှုများအတွက် Yarris ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းအတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Yarris '' ဖယ်ထုတ်ထားမဟုတ် ''
နေဆဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် Yarris ကသူ၏လွတ်လပ်မှုကိုရရှိလင်ဒါ Craig ရဲ့လူသတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့အသိအကျွမ်းကစွပ်စွဲထားသည်။ ဒီစွပ်စွဲသံသယရှိသူစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောအခါ, Yarris လူသတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အဓိကတရားခံဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါကောက်ယူသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်ဖျော်ဖြေသမားရိုးကျစမ်းသပ်နေတဲ့တရားခံအဖြစ် Yarris ဖယ်ထုတ်လို့မရဘူး။ အစိုးရရှေ့နေတွေလည်းသူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချဖို့, လူသူမ၏လူသတ်မှုရှေ့တော်၌ထိုသားကောင်နှောင့်ယှက်မြင်ကြအဖြစ် Yarris ဖော်ထုတ်ခဲ့သူသားကောင်ရဲ့ Co-အလုပ်သမားများ, က jailhouse သတင်းပေးနှင့် identification ၏သက်သေခံချက်အပေါ်မှီခို။
မစ္စစ် Craig အဆိုပါကုန်တိုက်မှာကတခြားယောက်ျားအားဖြင့်သွားရမည်ခံရစောဒကတက်ခဲ့ကြနှင့်ကုန်တိုက်ဝန်ထမ်း Yarris ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်လူသတ်မှု၏အချိန်အနီးရှိကုန်တိုက်၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိခြောငျးထက်အခြားယောက်ျားမြင်ဘူး။ သို့သော် 1982 ခုနှစ်တွင်, က Nicholas Yarris လူသတ်မှု, မုဒိမ်းမှုနှင့်ပြန်ပေးဆွဲ၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။ သူဟာသေဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
Yarris အမြဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်ရမည်ဟုကြော်ငြာကြ၏။ 1989 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအပြစ်ကင်းစင်သက်သေပြဖို့ Post-ခံယူချက် DNA ကိုစမ်းသပ်ခြင်းတောင်းဆို Pennsylvania ပြည်နယ်၏ပထမဆုံးအသေခံအတန်းအကျဉ်းသားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာသူမပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်လူသတ်မှုသားကောင်လင်ဒါ Craig ရဲ့ကားထဲတွင်တွေ့ရသောလက်အိတ်တွေနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မည်သူမဆိုဇီဝပစ္စည်းအဘို့ထိုသူတို့စမ်းသပ်ဖို့ထင်မတိုင်မီသူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းတစ်သက်သေအထောက်အထားခန်း၌ထိုင်တော်မူ၏။ သက်သေအထောက်အထားအမျိုးမျိုးကိုအပိုင်းပိုင်း၏ DNA ကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏ Round 1990 ကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်အားလုံးအပြီးသတ်သောရလာဒ်များထုတ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
Up ကိုအသုံးပြုယင်း DNA ကို၏နောက်ဆုံး
2003 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာအက်ဒွပ် Blake ကထိုသားကောင်ရဲ့ကားထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့လက်အိတ်, သားကောင်ကနေလက်ချောင်းကိုခြစ်, နှင့်သားကောင်ရဲ့အောက်ခြေကိုတှငျတှေ့ကျန်ရှိနေသေးသောသုက်ပိုးအပေါ်စမ်းသပ်ခြင်း၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်အိတ်နှင့်သုက်ပိုးသက်သေအထောက်အထားမှရရှိသော DNA ကို profile များကိုတူညီလူတစ်ဦးကနေအစပြုတာထင်ရှား။ , က Nicholas Yarris သည်ဤစမ်းသပ်မှုများကဒီရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်အားလုံးဇီဝပစ္စည်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 3rd, 2003 တွင်ဒေါက်တာ Blake ကယ့်ရလဒ်တွေကိုအခြေခံပြီးတရားရုံး Yarris ရဲ့ခံယူချက်ဖျက်သိမ်းလိုက်သော, သူသည် postconviction DNA ကိုစမ်းသပ်ခြင်းများက exonerated ခံရဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် 140th လူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် - သေခြင်းတရားတန်းကနေ 13 DNA ကို exoneration နှင့်ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက် Pennsylvania ပြည်နယ်အတွက် ။
Yarris နေဆဲအစေခံရန်ဖလော်ရီဒါတစ်ဦးအသက် 30 နှစ်ဝါကျခဲ့ပေမယ့်ဇန်နဝါရီအပေါ်
15, 2004, ဖလော်ရီဒါ 17 နှစ်ကသူ့ဝါကျလျှော့ချ (အချိန်တာဝန်ထမ်းဆောင်) နှင့်သူ၏လွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုခဲ့။ အောက်ပါနေ့ကနစ်ခ် Yarris နောက်ဆုံးတွင် DNA ကိုသက်သေအထောက်အထားသူမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးပြောပါတယ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှထက်ပိုမို 21 နှစ်ကြာအပြီး Pennsylvania ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ကလေး Killer ဆူစမစ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
အဆိုပါ Theresa Andrews ကဖြစ်ရပ်မှန်
ချိုင် Vang Wisconsin ပြည်နယ်အမဲလိုက်ခြင်းဆူပူမှု6မုဆိုးဦးသေဆုံး
အဲလစ်က Walker: ပူလစ်ဇာဆု Winner
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Element တွေကိုဘာတွေလဲ?
Felicity အခြေအနေများ (မိန့်ခွန်း)
ဘယ်ခရစ်ယာန်အဆိုတော်များအားသီချင်းဆိုသီခငျြး "တင့်တယ်" ထဲက Find
Nancy Pelosi အလှမယ် Lube 1955 သိုလှောင်ဆင်ခဲ့သလား
တွမ်စွန်: အဆိုပါ PGA Tour ရဲ့ '' မစ္စတာ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု ''
Francisco က Pizarro ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အိမ်လုပ်လက်သည်းပိုလန်ဖယ်ရှားရေး Make လုပ်နည်း
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် MBA ဘွဲ့ရ
အဘယ်ကြောင့် Recycle ပလတ်စတစ်?
Apatosaurus, ပြီးတာနဲ့ Brontosaurus အဖြစ်လူသိများသည့်ဒိုင်နိုဆော
အဆိပ်အပြင်းဆုံးဓာတု Compound ဆိုတာဘာလဲ
1965 မှ 1909: အ NAACP ၏ Timeline ကို
ဧလိရှဲက: ကိုယ်ရေး & ဧလိရှဲက, ဓမ်မဟောငျးကမျြးတမန်တော်မြတ်နှင့်ကျမ်းစာပုံ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
စာရင်းစစ် Find ရန်အဘယ်မှာတွင်7အကြံပြုချက်
အီတလီကြိယာ conjugation: Cadere
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကွန်ဗင်းရှင်း၏5Key ကိုအပေးအယူ